TSY FANARAHAN-DALANA : Vehivavy tompona Bar iray nosamborin’ny Polisy teny 67ha
Tsy mandefitra ny Polisy ary tsy manaiky ireo izay minia tsy manara-dalàna hatrany mandritra ny fotoana fihibohana, toromarika napetraky ny Filoham-pirenena izao. 31 mars 2020
Raha ny tatitra voarainay omaly teo am-panoratana lahatsoratra dia vehivavy tompona “trano fisotroan-toaka” na Bar iray teny amin’ny 67 ha no voatery tsy maintsy nosamborina ary nakatona tanteraka mihitsy ny tsenany.
Voalaza mantsy fa mbola sahy mamory olona ao amin’ny toeram-pivarotany ity farany no sady mampirisika ireo mpanjifany mba ho sahy hanohitra ireo mpitandro filaminana izay miteny azy ireo. Tsikaritra moa fa saika tsy manara-dalàna ny fepetra napetraka ny ankabezan’ireo mponina nipetraka manodidina eny 67 ha, Ankazomanga sy Antohomadinika iny.
Nogiazana koa ny kilalaon’ireo ankizy nivezivezy teny an’arabe
Etsy ankilany dia noravan’ny Polisy rahateo koa ireo ankizy sy tanora maromaro milalao baolina eny an’arabe sy milalao “roller”. Tsy maintsy nogiazana ireo kilalao mba tsy hahafahany manao izany intsony fa hisitrika any an-tranony amin’izay, hoy hatrany ny fanazavana voaray. Tsy kilalao ny areti-mandoza tafiditra eto amin’ny Firenena ka mampatsiahy ny vahoaka Malagasy hatrany ny eo anivon’ny Polisim-pirenena mba hanaja ny toromarika. Hiandry hoe “nisy namoy ny ainy noho ny aretina ve izay vao hikoropaka daholo ny rehetra tsy manaiky alamina mba hanaraka ny fepetra napetraka ?”